Vaovao - Ny karazany sy ny fahombiazan'ny tavoahangy fitaratra
Ny tavoahangy fitaratra dia ampiasaina amin'ny fonosana vokatra amin'ny indostrian'ny sakafo, divay, zava-pisotro, fanafody ary indostria hafa. Ireo tavoahangy fitaratra sy kapoaka dia manana fitoniana simika tsara ary tsy mifindra ao anatiny. Azo antoka ny fampiasana azy ireo noho ny fahamafisan'ny rivotra sy ny fanoherana ny hafanana avo. azo antoka. Tavoahangy fitaratra tavoahangy fonosana zava-pisotro nentim-paharazan'ny fireneko, ny vera koa dia karazan-fonosana vita amin'ny tantara efa ela. Miaraka amina fonosana fonosana marobe any an-tsena, ny kaontenera fitaratra dia mbola mitana toerana lehibe amin'ny fonosana zava-pisotro, izay tsy afa-misaraka amin'ny toetra fonosana izay tsy azon'ny fitaovana fonosana hafa soloina.
Tao anatin'izay taona faramparany izay dia nitombo hatrany ny filan'ny tokantrano tavoahangy sy kapoaka fitaratra fa ny fitaky ny kalitaon'ny vokatra (Toetra) ary ny habetsany (Kalitao) dia nitombo ihany koa. Izahay dia nanatsara ny firafitry ny tavoahangy fitaratra sy ny kaontenera hifanaraka amin'ny isan-karazany Miaraka amin'ny famonosana vokatra samihafa, nohatsaraina ny naotin'ny vokatra sy ny sanda fanampiny, nitarina ny fizarana tsena, ary ny fifaninan'ny indostrian'ny tavoahangy fitaratra misy ny fireneko amin'ny tsena iray manontolo dia nohatsaraina.
Betsaka ny tavoahangy sy kapoaka fitaratra, sokajina ho boribory, boribory lavalava, toradroa, mahitsizoro ary fisaka arakaraka ny endriny. Anisan'ireny, boribory ny ankamaroany. Raha ny haben'ny vavan'ny tavoahangy dia misy vava malalaka, vava kely famafazana vava sns ..., araka ny fomba famolavolana, misy tavoahangy misy tavoahangy sy tavoahangy mifehy. Raha ny fanasokajiana loko dia misy tsy misy loko sy miloko. Tsy hentitra ilay fanasokajiana etsy ambony. Indraindray ny karazan-tavoahangy mitovy amin'izany dia azo sokajiana amin'ny karazany maro, ary arakaraka ny fivoaran'ny fiasa sy ny fampiasana tavoahangy fitaratra sy kapoaka dia hitombo isan'andro ny isan-karazany.
Ny fonosana tavoahangy fitaratra fanafody dia mifamatotra akaiky amin'ny tavoahangy fitaratra fanafody. Amin'ny ankapobeny dia misy karazana fonosana roa ho an'ny tavoahangy fitaratra fanafody. Ny iray dia fonosana tsotra amin'ny baoritra mifangaro, ary ny iray hafa dia ny hafanana amin'ny fampiasana sary mihetsika PVC na PE. Fintino ny fonosana, ary fonosana pallet kely. Tavoahangy fitaratra tavoahangy fonosana zava-pisotro nentim-paharazan'ny fireneko, ny vera koa dia karazan-fonosana vita amin'ny tantara efa ela. Miaraka amina fonosana fonosana marobe any an-tsena, ny kaontenera fitaratra dia mbola mitana toerana lehibe amin'ny fonosana zava-pisotro, izay tsy afa-misaraka amin'ny toetra fonosana izay tsy azon'ny fitaovana fonosana hafa soloina. Raha ny fahitana ny fiarovana ny vokatra sy ny fepetra takiana amin'ny fahadiovana, ny kalitaon'ny fonosana hafanana sy ny fonosana pallet dia ambony lavitra noho ny fonosana baoritra mahazatra. Ankehitriny izy io dia nanjary sarimihetsika PE izay nihena hafanana ary napetraka tao anaty baoritra, izay madio sy madio ary azo fonosina ho toy ny holatra (holatra). Ity koa no làlan'ny fampandrosoana ny tavoahangy fitaratra fitsaboana.
Ny fepetra henjana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana dia mahatonga ny tsindry tavoahangy fitaratra ho avo dia avo. Tavoahangy fitaratra, mpamokatra tavoahangy efa za-draharaha, ary vokatra vita amin'ny vera dia manana traikefa amin'ny famolavolana sy fivarotana tavoahangy fitaratra isan-karazany (Varotra) Satria ny tavoahangy sy kapoaka fitaratra dia mangarahara sy miorina amin'ny simika (fanazavana: milamina sy miorina; tsy misy fiovana) Tsara fampisehoana, vidiny ambany , fisehoana tsara tarehy, mora ny mamokatra (Mamokatra) famokarana, azo averina imbetsaka sns, ka na eo aza ny fifaninanana fitaovana fonosana hafa (fifaninanana), ny mpanamboatra tavoahangy fitaratra dia mbola manana tombony hafa ihany Ireo toetra tsy afaka soloin'ny fitaovana fonosana. Tavoahangy fitaratra tavoahangy fonosana zava-pisotro nentim-paharazan'ny fireneko, ny vera koa dia karazan-fonosana vita amin'ny tantara efa ela. Miaraka amina fonosana fonosana marobe any an-tsena, ny kaontenera fitaratra dia mbola mitana toerana lehibe amin'ny fonosana zava-pisotro, izay tsy afa-misaraka amin'ny toetra fonosana izay tsy azon'ny fitaovana fonosana hafa soloina.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, miaraka amin'ny fitomboan'ny fangatahan'ny mpanjifa amin'ny fanodinana lalina ny vokatra fonosana tavoahangy fitaratra (Product), nanjary fahita ny fanontana lamba vita amin'ny landy sy ny voninkazo vita amin'ny vera, ary miaraka amin'ny kalitao sy ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny fanontana landy, fanontana pirinty sy loko hosodoko any an-trano sy any ivelany Mihamafy ny fanerena, apetraho amin'ny tsindry be ireo orinasan-kaontenera fitahirizana tavoahangy fitaratra maro.
Ny Buddhism dia nampidirina tany Sina avy tamin'ny tarana-mpanjaka Han, ary nitombo sy nandroso izy io nandritra ny Tarana Wei sy Jin. Ny volamena, ny volafotsy, ny amber, ny haran-dranomasina, ny vato vato, ny glasada miloko ary ny agata dia notanisaina ho harena fito amin'ny bodisma. Ho fanampin'izany, ny ray aman-drenin'i Cao Cao dia nandrisika ny fandevenana manify, toa ny didim-pahafatesan'i Cao Cao ho an'ny fahafatesany, "niangona niaraka tamin'ny fotoana, tsy nisy harena volamena sy jade", ka ny rafitra fandevenana natao tamin'ny Dinam-panjakan'i Han mihoatra ny 400 taona no maty, ary ny perla nihady sy zavatra hafa koa nilatsaka mafy. Ny tavoahangy fitaratra mangarahara dia nampiasaina mba hanaovana akanjo taolam-paty ho toy ny fanoloran'ny bodista, ary vakana fitaratra maro be no nanaingoana ireo sarivongana Buddha sy tempoly, izay somary naneho ny fivoaran'ny teknolojia fitaratra tamin'izany fotoana izany.